Fort Breendonk, Fort Breendonk - Antwerp
Eoropa Belzika Antwerp
Adiresy: Brandstraat 57, 2830 Willebroek, Belzika
Tel: +32 3 860 75 24
Vanim-potoana: 20 septambra 1940 - Septambra 1944
Ny ora fiasana: 9.30 - 17.30
Ny tranombakoka miavaka ho fahatsiarovana an'ireo niharam-boina tao amin'ny toby fitanana tany Belzika dia ny Fort Breandonck, naorina tamin'ny Septambra 1906 teo akaikin'ny tanàna mitovy amin'io anarana io, izay miorina 20 kilometatra miala ao Antwerp . Amin'izao fotoana izao dia manintona mpizaha-tany maro ity fisintonana tsy manam-paharoa ity.
Fialan-tsiny vetivety teo amin'ny tantara
Nanomboka tamin'ny fotoanan'ny ady ny fanorenana ilay rafitra. Fort Breandonk dia natao hiarovana ny tanàna avy amin'ny tafika alemana, ka nisy lavaka lalina nanodidina azy, izay feno rano. Hatramin'ny tsy nahombiazan'ilay fiarovana tamin'ny asa voalohany, taorian'ny nisamboran'ny tafika alemà tamin'ny 1940, dia nanomboka nametraka gadra izany. Tao amin'ny toby fitanana dia tsy nisy efitra fisakafoanana, fa na ny tsy fisian'izy ireo aza dia tsy namela voafonja ho afaka niaina. Araka ny voalazan'ny loharano sasantsasany dia fantatra fa teo amin'ny 3 500 000 ny olona tao am-ponja, ary olona maherin'ny 400 no maty.
Efatra taona taty aoriana, tamin'ny fifandraisana tamin'ny fanafahana an'i Belzika , i Fort Breandonck dia nampiasaina ho fonja ho an'ny famaranana ny mpiara-miasa. Tamin'ny Aogositra 1947, dia nambara ho fahatsiarovam-pirenena ny fiarovana.
Inona no mampiavaka ny tanàna?
Amin'izao vanim-potoana Belzika izao dia tranombakoka. Ny zavatra rehetra dia voatahiry tamin'ny endriny voalohany: ny tranom-bilia tamin'ny fotoana niadiana, ary ny hastika Nazi teo amin'ny rindrin'ny trano fiarovana. Ary taorian'ny fanokafana ny tranom-bakoka, ny anaran'ireo rehetra nodimandry nandritra ny fakana an-keriny dia voasokitra teny amin'ny rindrina ihany koa. Ireo mpitsidika koa dia afaka mifankahalala amin'ny sary be dia be.
Ahoana ny fandehanana any amin'ny trano mimanda?
Alohan'ny fijanonan'i Fort Breandonk, ireo mpizahatany dia afaka mahazo izany amin'ny fomba maro. Avy amin'ny Station Central Station isaky ny 15 minitra, miala ny lamasinina ho an'ny Station Mechelen. Avy eo dia mankany amin'ny toerana misy ny seranana bus 289, izay mihazakazaka isaky ny adiny iray.
Ny fitateram-bahoaka avy any Antwerp dia tsy manana lalana mivantana mankany amin'ny fort. Avy ao amin'ny Kianja Nasionalin'ny Banky, mandeha fiara fitaterana 15 minitra mankany amin'ny fijanonan'ny Boom Markt, avy eo ny ora tsirairay mankany amin'ny trano fiarovana dia misy laharana fiara fitateram-bahoaka 460. Afaka mandray taxi na manofa fiara ianao ary handeha amin'ny dianao.
Ny Museum Avtomir
Ahoana ny fomba fanasana kilalao mena?
Efitrano ho an'ny zazavavy
Kitapo mena - ahoana no hisafidianana?
Inona no hanomezan'ny alika aquarium?
Ny mason'ny sambokely dia mandre ny fomba nilazan'ny reniko hoe: "Tiako ianao", ary manohina anao izany!
Ny ranjon'ny vavony
Fanadiovana nofinofy - soavaly iray sy ny fandikana ny nofy mifandraika amin'ny soavaly
Ny hips - ireo toetra amam-panahy sy ny fanoherana
Mijoro ho an'ny fahitalavitra
Sakafo voaroy amin'ny tongolobe
Ny saina dia tsy mety: toe-javatra 16 izay manafintohina ny rehetra
Inona ny fanahin'olombelona ao amin'ny ortodoksa sy amin'ny fomba fijery siantifika?